Zavatra vitsivitsy mety tsy fantatrao momba ny famandrihana Apple Podcast | Avy amin'ny mac aho
Andro vitsy lasa izay, ny fomba famandrihana podcast an'ny Apple Podcasts dia natomboka tamin'ny fomba ofisialy. Amin'ity tranga ity dia miresaka momba ny antsipirian'ny serivisy mety tsy fantatrao izahay, ary izany dia tsy ny olona rehetra, ohatra, izany Ireo famandrihana ireo dia misy any amin'ny firenena sy faritra maherin'ny 170 na iOS 14.6, iPadOS 14.6 ary macOS 11.4 na taty aoriana no takiana amin'ny fampiasana an'io serivisy io. Saingy misy antsipiriany bebe kokoa izay azonao antoka fa tsy fantatrao momba ity serivisy Apple vaovao ity ary izany no antony hanehoantsika ny sasany amin'izy ireo anio.
Hanomboka amin'ny zavatra manan-danja indrindra isika, ny vidiny
Betsaka aminareo no hanontany ny vidin'ireny fampiatoana podcast an'i Apple ireny ary afaka milaza izany izahay manomboka amin'ny 0,49 € isam-bolana, izay ny vidiny ambany indrindra na dia ny zavatra tadiavin'ny mpamorona votoaty aza. Araka ny efa nampitandremanay tamin'ny tranga teo aloha, Apple dia tsy mandoa na inona na inona amin'ity serivisy ity ho an'ny mpamorona na mpamandrika, ka tolotra ihany no omen'izy ireo.
Ireo mpihaino dia afaka mitantana famandrihana ary mandeha isan-taona hatramin'ny faktiora isan-taona - raha misy - avy amin'ny fikirakirana Apple ID, izay azo idirana avy eo an-tampon'ny pejy. Henoy ny kiheba ao amin'ny Apple Podcasts
Etsy ankilany dia mila milaza isika fa ny podcast dia azo henoina amin'ny Apple Watch miaraka amin'ny watchOS 7.5 na taty aoriana, amin'ny HomePod, HomePod mini ary CarPlay. Saingy ny antsipiriany mahaliana dia ny famandrihana an'ity serivisy ity dia azo alefa ho toy ny karatra fanomezana Ny famandrihana dia azo zaraina amin'ny mpianakavy enina ao amin'ny En Familia Y afaka mahita tolo-kevitra ho an'ny programa hafa mivantana ao amin'ny Podcast an'i Apple an'ny Apple.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Zavatra vitsivitsy mety tsy fantatrao momba ny famandrihana Apple Podcast